Iindaba - Uyikhetha njani i-blower mower blade？
Iimpawu zomatshini wokucheba ingca ngumsebenzi othe tyaba, ukusebenza ngokulula, kunye nokukwazi ukusika okunamandla kwezinto ekufuneka zinqunyiwe, ikakhulu ingca, kwaye zilungele ingca enemveliso ephezulu kunye neepaki ezinkulu. Umatshini wokucheba ingca usika ingca ngokucheba okunxulumene nokucheba kwemela ehambayo kunye nemela emiselweyo kwisikere. Lubonakala ngokusikwa kakuhle kweendiza kunye namandla asezantsi afunekayo, kodwa ayikwazi ukuziqhelanisa nedlelo kwaye kulula ukuyivimba. Ilungele umhlaba othe tyaba nowendalo. Nemisebenzi yengca eyenziweyo. Ukuveliswa nokusetyenziswa kwemitshini yokucheba ingca eguqulwayo kwaqala phakathi kwiminyaka yoo-1980. Thembela kwincakuba kwisantya esiphakamileyo esijikelezayo ukusika intloko. Ngokuphuculwa kwesayensi nethekhinoloji, amandla okusebenza kweemveliso zokucheba ingca ezisandula ukuphuculwa ziye zaphuculwa kakhulu, kwaye isantya siphuculwe kakhulu, konga ixesha lokusebenza labasebenzi bokhula kunye nokonga uninzi lwemithombo yoluntu. Namhlanje ndiza kukwazisa ngokukodwa indlela yokukhetha ifayile ye-blade yomatshini wokucheba ingca.
Ikhaba lomatshini wokucoca izixhobo yi i-blade emininzi yokucheba, kunye nolawulo olukude yi-blade 2-blade mower blade. Umgaqo wokusebenza uyafana. Zonke zihamba ngesantya esiphezulu zijikelezisa izixhobo zokucoca ingca. Ngokwethiyori, i-blade-cut-cut blower blade blade Ukhuseleko luqinisekile, umtya omde ubukhali, kwaye indawo yokugubungela ikwanjalo noko. Ukuqina komatshini wokucheba ingca kunxulumene neizinto zomatshini wokucheba ingca, hayi imilo.
Ngapha koko, ukhetho lwee-blower mower blade lubaluleke kakhulu. Unokukhetha ii-blower zokucheba ingca ngezihlandlo ezahlukeneyo. Umatshini wokucheba ingca ojikelezayo uxhotyiswe ngeendlela ezahlukeneyo zokucheba ingca ukuze ufumane iziphumo ezilungileyo phantsi kweemeko ezahlukeneyo zengca. Ukusebenza kwesiphumo esihle, amaphiko aphezulu, amaphiko aphakathi, kunye neepiko ezijikelezayo ezinamaphiko asezantsi kufuneka zongezwe ngokweempawu zenkundla ekugqibeleni ukufumana iimpawu zokusika ezahlukeneyo. Ukuba ufuna ukucanda ingca, unokukhetha isinqe esinamandla esinamazinyo amaninzi esomatshini wokucheba ingca. Lo matshini wokucheba ingca unokuyityumza ingca kunye namagqabi abe ziingceba ngaphandle kokuchaphazela inkangeleko.
UZhengchida ebonelela ngeebhleyisi ezifanelekileyo Iifektri ze-OEM zeBladekunye nasemva kweemarike ezinje ngeevenkile, iivenkile ezinkulu, iivenkile ezinkulu, kunye neenkampani ezinikezela ngocingo Emva kokuphuhliswa okuqhubekayo phantse kweminyaka engama-20, iZhengchida inoluhlu olubanzi nolugqityiweyo lwemveliso yegadi. I-Zhengchida ngoku ineemodeli ezingaphezu kwe-2000 ezahlukeneyo zendlela yokucheba ingca egubungela phantse zonke iimodeli ezikhoyo kwintengiso.